Posted by သုတရသအဖွာဖွာ on April 2, 2019
ကဲ.. အပန်းပြေ ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ (၁ . ၄ . ၂၀၁၉) မှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ၂ ကြိမ်မြောက် သိန်း တစ်သောင်းခွဲ ဆုကြီးကို ကျောင်းကုန်းမြို့ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်မှ လူငယ်လေးတစ်ဦး ကံထူးရှင် အဖြစ် ဆွတ်ခူးရရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းလေး ပေးလိုက်ပါတယ်..။
အခုပေါက်သွားတဲ့ ကံထူးရှင်မိသားစုလေးရဲ့ ပုံလေးတွေ လိုင်းပေါ်မှတွေ့လို့ ခံစားမိတာလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်ခံစားမိသလိုမျိုး အပန်းပြေ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခံစားမိလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေပါတယ်နော်..။
ဒီပုံလေးတွေကို မြင်မိတော့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေကို ခန့်မှန်းမိပြီး အခုလို သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးသွားတော့ အတိုင်းမသိအောင်ကို ၀မ်းသာပိတိဖြစ်မိတယ်..။ တွေးကြည့်ရင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ အပျော်တွေကို လက်တွေ့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ မမြင်ရသေးပဲနဲ့ ကြက်သီးထအောင်ကို ပျော်မိတယ်ဗျာ..။
ကံထူးရှင်မိသားစုလေး ရှေးဘ၀ကုသိုလ်ထူးကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကံတရားနဲ့ အတူ အခုကစပြီး သက်ဆုံးတိုင်အထိ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ကြပါစေ..။ အလှူအတန်းများလည်း လှူနိုင်တန်းနိုင်ကြပါစေလို့ အပန်းပြေ မှဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။
အပန်းပြေ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ခံစားမိတာလေးတွေ ကွန်မန့်ကနေ မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်..။ ApannPyay Photo – FB
အောငျဘာလေ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆု ကံထူးရှငျမိသားစုလေး
ကဲ.. အပနျးပွေ ခဈြပရိသတျကွီးရေ (၁ . ၄ . ၂၀၁၉) မှာ ဖှငျ့လှဈလိုကျတဲ့ ၂ ကွိမျမွောကျ သိနျး တဈသောငျးခှဲ ဆုကွီးကို ကြောငျးကုနျးမွို့ အမှတျ (၃) ရပျကှကျမှ လူငယျလေးတဈဦး ကံထူးရှငျ အဖွဈ ဆှတျခူးရရှိသှားပွီ ဖွဈကွောငျး သတငျးကောငျးလေး ပေးလိုကျပါတယျ..။
အခုပေါကျသှားတဲ့ ကံထူးရှငျမိသားစုလေးရဲ့ ပုံလေးတှေ လိုငျးပျေါမှတှလေို့ ခံစားမိတာလေး မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ..။ ကြှနျတျောခံစားမိသလိုမြိုး အပနျးပွေ ပရိသတျကွီးလညျး ခံစားမိလိမျ့မယျဆိုတာ ကြိနျးသပေါတယျနျော..။
ဒီပုံလေးတှကေို မွငျမိတော့ သူတို့လေးတှရေဲ့ ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့ ဘဝပေးအခွအေနကေို ခနျ့မှနျးမိပွီး အခုလို သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီးကို ဆှတျခူးသှားတော့ အတိုငျးမသိအောငျကို ဝမျးသာပိတိဖွဈမိတယျ..။ တှေးကွညျ့ရငျးနဲ့ သူတို့ရဲ့ အပြျောတှကေို လကျတှေ့ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ မမွငျရသေးပဲနဲ့ ကွကျသီးထအောငျကို ပြျောမိတယျဗြာ..။
ကံထူးရှငျမိသားစုလေး ရှေးဘဝကုသိုလျထူးကွောငျ့ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ ကံတရားနဲ့ အတူ အခုကစပွီး သကျဆုံးတိုငျအထိ စိတျခမျြးသာစှာ နထေိုငျနိုငျကွပါစေ..။ အလှူအတနျးမြားလညျး လှူနိုငျတနျးနိုငျကွပါစလေို့ အပနျးပွေ မှဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ..။
အပနျးပွေ ခဈြပရိသတျကွီးလညျး ခံစားမိတာလေးတှေ ကှနျမနျ့ကနေ မြှဝပေေးခဲ့ပါဦးနျော..။ ApannPyay Photo